Cunnooyinka Kala-Baxsan - KII SHAQAYNAYA! | Cuntada Nutri
Cuntada kala go'day
Sergio Gallego | | Caafimaadka
Cuntada kala go'day waxay ku dhex jirtaa kooxda qaababka khafiifinta taas ma xaddidayo nooc kasta oo cunto ah taasina waxay u oggolaanaysaa qofka go’aansada inuu raaco wax yar cun, sidaa darteed looma tixgeliyo inay tahay nooc xaddidan oo cunto ah.
Noocyada noocan ah waxaa loogu talagalay dadkaas oo raba inuu miisaanka iska dhimo iyo kuwa doonaya inay xajistaan ​​oo ay ka fogaadaan qabashada xoogaa kiilo dheeraad ah. Marka xigta wax yar ayaan kaaga sheegi doonaa cuntada kala go'day sidaa darteed waad wada ogaan kartaa faa iidooyinkiisa iyo qatartiisa.
1 Astaamaha cuntada kala-go'day
2 Kooxaha cuntada ee ku jira cuntada kala go'day
2.5 Khudaarta iyo cagaarka
3 Sida loogu daro cuntooyinka ku jira cuntada la kala saaray
4 Tusaalaha menu toddobaadlaha ah ee cuntada kala go'day
5 Miyuu cunnada kala-go'day waxtar leedahay?
Astaamaha cuntada kala-go'day
Cuntada kala go'day ka tirsan yahay kooxdaas cuntooyinkaas iyagu ma xaddidaan nooc kasta oo cunto ah qorshaha miisaankaaga oo hoos u dhaca. Furaha cuntada noocan oo kale ah waa kala tag dufanka, borotiinnada iyo karbohaydraytyada habkanna iska ilaali inaad wada qaadato isla saxan.
Adoo si gooni ah u qaadanaya nafaqooyinka ayaa sheegay, jidhku wuxuu qaataa qayb ka mid ah dufanka uu kaydiyey inaad karti u yeelato marka lagu daro baabi'inta xaddi badan oo dheecaan ah, taas oo gacan ka geysaneysa yareynta baruurta jirka.
Mid ka mid ah qodobbada lagu farxo nooca noocan ah, waa inay ka caawiso qofka raaca inuu si cad u kala sooco koox kasta oo cunto ah. Sidan ayaa lagu yidhi qofku wuxuu wax ugu quudin karaa qaab gebi ahaanba caafimaad leh oo dheellitiran.
Kooxaha cuntada ee ku jira cuntada kala go'day
Sidii aan horeyba kuugu sheegay, muuqaalka ugu muhiimsan ee cuntada kala-go'day ayaa ah inay kooxi noocyada kala duwan ee cuntada iyada oo ku xidhan nafaqooyinka ay curiyaan.
Caanaha iyo noocyada caanaha laga sameeyo
Cawska loo yaqaan 'Strawberries'
Khudaarta iyo cagaarka
Aan tayo lahayn
Mushrooms iyo boqoshaada
Sida loogu daro cuntooyinka ku jira cuntada la kala saaray
Markaas waan ku siin doonaa tilmaamaha maxaa habboon inaad raacdo markay tahay isku dar cuntooyinka kala duwan ku saabsan cuntada kala go'day:
Iskuma dari kartid cuntada dufanka leh borotiinada.
Iskuma dari kartid waxyaabo kala duwan karbohaydraytyada isla saxan.
Waa inaadan ku qasin carbohydrates borotiinada.
sidaas darteed khudaarta sida khudradda waxaad ku qasan kartaa cunno kale marba haddii uusan miro lahayn.
Waa inaad ku cuntaa midhaha at subax-dhexe ama galab-galab iyo iyada oo aan lagu qasin cunto kale.
Waa inaadan cunin borotiin ama karbohidraat inta lagu guda jiro cashada.
Macmacaan Waa inuu ka koobnaadaa kafee, faleebo ama yogurt la dubay.
Intaad wax cuneyso ma cabi kartid cabitaannada sonkorta leh ama casiirka.
Qaadashada ee khamriga iyo sonkorta.
Tusaalaha menu toddobaadlaha ah ee cuntada kala go'day
Waan ku tusayaa tusaale menu taasi waxay saldhig u noqon kartaa waxaad soo jeedineyso cuntada kala go'day
Isniinta: Quraacda baaquli muesli caano leh iyo faleebo shaah cagaaran ah. Aroortii ayaad mid yeelan kartaa gabal miro ah. Inaad baastada ku cuntid khudaar iyo caano fadhi. Si aad ugu cuntid xabbad miro ah. Casho salad cagaaran, kaluun la dubay iyo faleebo.
Talaado: Quraacda quraacda leh saliida saytuunka iyo kafee. Aroortii goor cad oo midho ah. Waqtiga qadada digaag la dubay oo leh khudaar iyo yogurt la shiiday. In faleebo la galiyo. Waqtiga cashada a ukunta la shiiday khudaarta iyo faleebo.
Arbacada: Quraacda waad heli kartaa sausages kala duwan ku xiga faleebo. Aroortii goor cad oo midho ah. In la cuno a legume iyo saladh khudradeed oo ay la socdaan caano fadhi ah. Marka ay timaaddo inaad cunto fudud hesho, xabbad miro ah. Casho qadada walaaq khudradda, a pralette faranse omelette iyo faleebo.
Khamiista: Quraacda waad heli kartaa badarka qaar leh yogurt dabiici ah oo ku xigta a faleebada shaaha cas. Aroortii goor cad oo midho ah. Waqtiga qadada saxan fuusto turkey ah iyo faleebo. Si aad ugu cuntid xabbad miro ah. Cashada salad cagaaran oo ay weheliyaan clams uumi iyo yogurt dabiici ah.
Jimce: Quraac xoogaa jiis ah oo aan dufan lahayn oo ay la socdaan yogurt dabiici ah iyo faleebo. Aroortii goor cad oo midho ah. In la cuno makarooni qaar leh boqoshaada iyo caano fadhi. Si aad ugu cuntid xabbad miro ah. Casho yar salmon la dubay iyo yogurt la shiiday.
Sabtida: Quraacda waad heli kartaa rooti leh saliid saytuun ah oo ay la socdaan caano fadhi ah iyo faleebo. Inaad haysato gabal midho ah oo qadada ah. Waqtiga qadada Hilib la dubay khudaarta sauteed iyo faleebo. Si aad ugu cuntid xabbad miro ah. Cashada omelette asparagus iyo faleebo.
Axada: Waqtiga quraacda koob muusli ah leh caano fadhi ah iyo faleebo. Qadada xabbad miro ah. In la cuno saxan karsan hilibka turkey oo leh khudaar iyo yogurt la shiiday. Si aad ugu cuntid xabbad miro ah. Casho ahaan waad heli kartaa maraq khudaar ah oo ay weheliyaan qaar ka mid ah moosyada uumiga ah iyo faleebo.
Miyuu cunnada kala-go'day waxtar leedahay?
Sida laga soo xigtay khubarada nafaqada badankood, cuntada kala go'day waa qorshe miisaan lumis fiican inaad lumiso xoogaa kiilo dheeraad ah adigoon aad u gaajoon oo aan la socon nafaqo ku filan jirka. Sida muuqata furaha guusha cuntadan lama helin kala saarida kooxaha cuntada kala duwan, laakiin sababta wax ku oolnimadeedu waxay ku jirtaa iyada qaadashada kaloriinta oo hooseysa iyo mamnuucida qaadashada alaabada kaladuwan ee waxyeelada u leh jirka sida tani waa kiiska sonkorta ama aalkolada.
Sikastaba, hoos Video ayaan kuu daayey maxaa qiimeeya haddii ay mudan tahay in la bilaabo cunnadan iyo lumiso kuwaas dheeriga ah kuna noqo shaxdiinnii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Caafimaadka » Cuntada kala go'day
Tilmaamaha lagu kicinayo koritaanka timaha
Astaamaha cuntada Atkins